Parent Letter (October) – Mandalay International Science Academy
October 2, 2020 Wai Yan
First of all, we would like to thank you all for your loyalty and patience during this crisis.
This isadifficult period not just for us, but for all schools and businesses around the world, and online learning is our only choice to keep our students learning safely in this climate.
We do not see takingabreak as an option, because this will set learners back in their education and could affect them negatively in the long run. Students missing halfayear, or evenafull year of school, will not only miss out on new content, but will forget what they have already learnt and regress by one or more years in terms of their development.
Of course, online learning has its ups and downs, and we have collectedawealth of data from students and parents that will be used to improve our services even more. We are thankful to everyone who answered our survey and gave their valuable opinions.
We are happy that feedback has been mostly positive, with students and parents recognizing that this is the best alternative in our current situation. Many have also expressed that they enjoy this form of instruction and are gaining new abilities, especially independent learning and computer-related skills. This method also opens up new avenues of communication between the teacher and the student’s home, and we hope that parents are now more in touch with their children’s education than they were before.
We all miss the social interaction ofanormal school day, and we realise that more is demanded of guardians in this scenario, especially those parents of younger learners. Screen time is also an overriding issue, and we will take all of your concerns into account, as well as those of students and teachers, when we review and amend our timetable at the end of the current semester, while ensuring that the full curriculum is covered by the end of the school year.
This last point is important, as we need to guarantee to our learners that this year will be counted on record asafully completed Cambridge Assessment International Education academic school year. As an official Cambridge school and exam centre, our students will be eligible to take standardised Progression Tests, Checkpoint Tests and IGCSE exams on campus, and thus progress to the next level on the Cambridge pathway.
In terms of services, we have added some classes to the timetable, as an extra opportunity to learn. This includesastudy hour for primary students, in which they can go over their tasks and assignments with Assistant Teachers and thus lighten some of the parents’ burden. Also, Assistant Teachers are now present in all secondary classrooms. Finally,acounselling service is also available for students, in which they can call and speak to our certified counsellor, Tr Helen, in case they are having problems.
Our current discount policy will continue for as long as the online learning period does. Since we do not know how long this will last, it will be calculated once face-to-face classes return, and then deducted from the following year’s school fees.
In other news, we have recently renovated the campus. Aside from general renovation and painting, many social distancing, hygiene and safety-related measures have been implemented. We have also installed new cabling to ensureasmoother internet connection is ready to be used whenever we get the green light from government authorities to resume physical classes. When that does happen, it is anticipated that we will continue to use our online tools inablended learning format. In any event, we are fully ready to restart face-to-face classes whenever it is permitted.
Overall, we will keep on making changes where necessary, taking all of your valued opinions into account.
Please feel free to make an appointment or speak to any member of the admin team if you would like to discuss concerns or give us your input.
ဤCOVID ကာလအတွင်း လူကြီးမင်းတို့အားလုံး၏ သစ္စာရှိမှုနှင့် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားကို ဦးစွာ ပထမ ပြောကြားလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သာလျှင် ဤအခက်အခဲကို ကြုံတွေ့နေရသည်မဟုတ်ဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျောင်းများအားလုံးလည်း ကြုံ့တွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သင်ယူနိုင်ရန် online မှ သင်ယူခြင်းသာလျှင် ကျွန်တော်တို့အတွက် တခုတည်းသော ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းကိုခေတ္တနားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဟူ၍ ကျွန်တော်တို့ မမြင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုကဲ့သို့ ကျောင်းကို ခေတ္တနားခြင်းသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ပညာရေးကို နောက်ကျစေပြီး ရေရှည်တွင်လည်း အခက်အခဲများကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာသင်နှစ်ဝက် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်လုံးနားခြင်းသည် သင်ခန်းစာအသစ်များကို လွတ်သွားရုံမျှမက သူတို့ယခင်က သင်ယူပြီးသော သင်ခန်းစာများကိုပါ မေ့လျော့သွားပါလိမ့်မည်။ သူတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့အပိုင်းတွင်လည်း တစ်နှစ်ထက်ပို၍ နောက်ကျသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
online learning တွင် အားနည်းချက်နှင့် အားသာချက်များရှိပါသည်။ ထို့အပြင် မိဘများထံမှ မှတ်ချက်များကို ရရှိထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုအချက်များပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုထိရောက်သည့် သင်ကြားရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ survey သဘောထားမှတ်ချက် ကောက်ခံမှုကို ဖြေကြားပေးပြီး တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ထင်မြင်ချက်များပေး သည့်အတွက်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ဤအခြေအနေတွင် online မှ သင်ယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့် မိဘများ သိရှိပြီး ကောင်းသောထင်မြင်ချက်များပေးသည့်အတွက်လည်း အထူးပင်ဝမ်းသာမိပါသည်။ online မှ သင်ယူ ခြင်းသည် အတွေ့အကြုံအသစ်ဖြစ်သည့် ကွန်ပြူတာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စွမ်းရည်များ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်စွမ်းများကို ရရှိစေသည့်အတွက် မိဘများထံမှ နှစ် သက်သဘောကျသည်ဆိုသည့် ဖော်ပြချက်များကို တွေ့ရပါသည်။ ဤသင်ပေးသင်ယူစနစ်သည် ဆရာ၊ ဆရာမနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အိမ်အကြား ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ပေးသည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မိဘများသည် ကလေးများ၏ ပညာရေးနှင့် ယခင်ကထက်ပို၍ အကျွမ်းတဝင်ရှိလာသည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပုံမှန်ကျောင်းတက်ချိန် အတူတကွ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းခဲ့ရသည်များကို သတိရ လွမ်းဆွတ်မိပါသည်။ ဤ online သင်ယူမှု့တွင် အထူးသဖြင့် မူလတန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် မိဘအုပ်ထိန်းသူ၏ အကူအညီကို ပို၍ လိုအပ်ကြောင်းလည်း သတိပြုမိပါသည်။ ဖန်သားမျက်နှာပြင်နှင့် ထိတွေ့ချိန် screen time သည် အဓိက ဖြေရှင်းရမည့်အရာဖြစ်သည့်အတွက် မိဘများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသာမက ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလည်း အလေးပေး စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဤစာသင်နှစ်ဝက်အကုန်တွင် ပြန်လည်ရေးဆွဲမည့် အချိန်ဇယားအသစ်တွင် ထိုအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ရိုးကို ပြီးမြောက်အောင် သင်ကြားနိုင်ရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ယခုစာသင်နှစ်သည် Cambridge Assessment International Education ၏ ပုံမှန် စာသင်နှစ် တစ်နှစ် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပြည့်မြောက် အောင်မြင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်မည့် စာသင်နှစ် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အရေးကြီး အချက်အလက် တစ်ခုအနေဖြင့် ထပ်လောင်း အသိပေး ပြောကြားလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသည် Cambridge အသိအမှတ်ပြု ကျောင်းနှင့် စာစစ်ဌာနဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် Progression tests, Checkpoint tests နှင့် IGCSE စာမေးပွဲများကို ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ကျောင်းတွင် ဖြေ ဆိုကြပြီးနောက် Cambridge pathway သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း နောက်ထပ် level တခု တက်ရောက်သွားနိုင်မည်ဖြ်စကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားလိုပါသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သင်ကြားသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်သည့် အနေဖြင့် စာသင်ချိန်တချို့ကို ထပ်၍ ပေါင်းထည့်ထားပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် study hour ပါဝင်လာပြီး ဤအချိန်တွင် ကလေးများသည် သူတို့လုပ်ရမည့် သင်ခန်းစာများကို Assistant teacher များနှင့်အတူ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် မိဘများအတွက်လည်း ဝန်လျော့စေနိုင်ပါသည်။ Assistant teacher များကို အလယ်တန်းတွင်လည်း ထားရှိပေးထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ stationery service စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ကျောင်းသားများ လေ့ကျင့်ရမည့် သင်ခန်းစာများအား စာရွက်အဖြစ် ထုတ်ပေးကာ မိဘများထံ ဆက်သွယ် ပေးပါမည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကြုံတွေ့ကြရသော အခက်အခဲများ အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုလည်း ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် Certified counsellor ဖြစ်သော Tr. Helen ထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။
online learning ဖြင့် သင်ယူရသည့်အချိန်အတွင်း ကျောင်းစရိတ် လျှော့ပေးခြင်း အစီအစည်အားလည်း ယခင် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ online မှ သင်ပေးသင် ယူခြင်းသည် အချိန်ကာလမည်မျှကြာမည်ကို မသိနိုင်သည့်အတွက် ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါတွင် ပေးထားသော discount များကို တွက်ချက်ပြီး နောက်စာသင်နှစ် ပြန်ဖွင့်သည့်အချိန်တွင် လျော့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းပရဝဏ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ထပ်မံအသိပေးလိုသည်။
အထွေထွေ ပြင်ဆင်မှုများ နှင့် ဆေးသုတ်ခြင်းတို့ အပြင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား အကွာအဝေး သတ်မှတ်ခြင်း (social distancing)၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရစေရေး စသည့် ပြင်ဆင်မှုများ အားလည်း ထပ်တိုး ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အစိုးရမှ ခွင့်ပြချက်ရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကျောင်းများပြန်လည် ဖွင့်သည့်အခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အင်တာနက်လိုင်းများကို အသုံးပြုနိုင်စေရေးအတွက် ကေဘယ်လ်စနစ် အင်တာနက်လိုင်းများကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါ တွင်လည်း online မှ သင်ပေးသင်ယူခြင်းကိုလည်း ကျောင်းတွင်း သင်ကြားခြင်းနှင့် တွဲလျက် ဆက်လက် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ခွင့်ပြုချက် ရသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပုံမှန် face-to-face စာသင်ခန်းတွင်း သင်ကြားနိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မိဘများ၏ အကြံပေးချက်များကို လက်ခံပြီး လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိဘများအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှ မည်သူနှင့်မဆို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာအကြောင်းအရာများရှိပါက သို့မဟုတ် အကြံပြုလိုပါက အချိန်မရွေးချိန်းဆိုကာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။